Unitylọ Akwụkwọ Unity of Christ - WRSP
UZIOKWU NDỊ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ NKE NDỊ CHRISTIANITY TIMELINE
1845 (August 6): Myrtle Fillmore mụrụ Mary Caroline Page na Pagetown, Ohio.
1854 (August 22): Charles Fillmore mụrụ na St. Cloud, Minnesota.
1881 (March 29): Myrtle na Charles Fillmore lụrụ.
1886 (Mmiri): Myrtle Fillmore nụrụ okwu ihu ọha na New Thought nkwenye usoro ọgwụgwọ.
1887 (July): Fillmores nwetara asambodo dị ka Ndị Kraịst na-agwọ ọrịa.
1889 (Mmiri): Fillmores malitere usoro ọgwụgwọ na Kansas City, Missouri.
1889 (Eprel): Mbipụta mbụ nke Echiche nke Oge a, bụ magazin mbụ nke Unity, bipụtara.
1889 (Eprel): E hiwere Society of Silent Unity.
1903: E guzobere Kansas City Society of Practical Christianity, ụka anaghị akwụ ụgwọ.
1909: Unitydị n'otu malitere usoro mmekorita.
1914 (Eprel 14): E hibere ụlọ akwụkwọ Unity of Christianity.
1920: Fillmores nwetara ala nke ga-aghọ Unity Village.
1921 (Eprel 12): E bipụtara Nkwupụta Nkwupụta mbụ.
1931: Myrtle Fillmore nwụrụ.
1948: Charles Fillmore nwụrụ.
1925: E guzobere Ministerstù Na-ahụ Maka Ministersdị n'Otu, nke bu ụzọ na Association nke Chọọchị Unity.
1989 (Jenụwarị): E nyere Nkwupụta izizi nke izizi n'okpuru nduzi nke Connie Fillmore Bazzy, nwa nwa nwa Myrtle na Charles Fillmore.
2001: Connie Fillmore Bazzy mere ka a hazigharịa Schoollọ Akwụkwọ n'okpuru nchịkwa na-enweghị uru na nhazi Ọchịchị, na-agwụ nanị nduzi nke ezinụlọ Fillmore.
Ụlọ Akwụkwọ Na-adịghị Ịdị n'Otu nke Ndị Kraịst, nke kachasị dị mkpa na ndị dị ugbu a, American New Thought Movement, tọrọ ntọala 1880s site na di na nwunye si Kansas City, Missouri, Myrtle na Charles Fillmore. Nzube ohuru bu uzo nke okpukpe ndi mmadu malitere site n'agbata n'afo nke iri na itoolu na odida anyanwu nke United States. Ọ na-egosi na ụmụ mmadụ na-emepụta ihe n'eziokwu site na ụdị echiche anyị nakwa na Chineke bụ ike zuru oke, nke nwere ike ịbanye ma jiri ekpere na ntụgharị uche mee ihe. N'oge gara aga, ọgwụgwọ anụ ahụ abụwo nchegbu kachasị mkpa nke ọtụtụ ndị otu New Thought, ọtụtụ ndị makwaara New Thought maka nkwenye banyere ike nke uche iji gwọọ. Ogologo a gbasaa ngwa ngwa na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri na itoolu, na isi obodo ndị dị na Chicago, Kansas City, Denver, nakwa n'ọtụtụ obodo ndị dị na West Coast. Echiche ọhụrụ nwere enwekwa mmetụta dị ukwuu n'ụzọ ọdịbendị, na ozizi ọhụrụ na omume ọhụrụ nke na-arụ ọrụ n'ime ụzọ okpukpe dị iche iche na ozi nke isi ihe mgbasa ozi. Ndị a ma ama dị ka Norman Vincent Peale, Oprah Winfrey, na Joel Osteen niile nwere mmetụta doro anya nke New Thought. A mụrụ otu nwoke ma zụlite ya na gburugburu ebe obibi New Thought.
Myrtle Fillmore, a mụrụ Mary Caroline Page na August 6, 1845, a zụlitere na Chọọchị Metọdist. [Image na nri] O nwere ezi mmụta nke ọma maka nwanyị a mụrụ na narị afọ nke iri na itoolu na United States, na-agwụcha ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma debanye aha na Oberlin College, ebe ọ na-etinye aka na "The Literary Course for Ladies" (Vahle 1996; Witherspoon 1977: 5-10). O mesịrị nweta ọrụ dịka onye nkụzi na Clinton, Missouri, na 1868. Myrtle mere mkpesa banyere nsogbu ahụike n'oge ọ bụ nwata na afọ ndị okenye, na mgbe oge siri ike nke mgbanwe nke ọnọdụ ihu igwe Missouri, ndị dọkịta gwara ya ka ọ kwaga ebe dị ọkụ ma drier. Ọ kwagara ebe obibi maka ọgwụgwọ nke ndị ọrịa na-eri ihe na nso Denison, Texas, n'oge ụfọdụ n'etiti 1870s (Vahle 1996; Witherspoon 1977).
Charles Fillmore mụrụ na August 22, 1854, na ntanetị India na nso St. Cloud, Minnesota. Fillmore si nna hapụrụ ezinụlọ mgbe Charles dị afọ asaa, nne ya, Mary Fillmore, zụlitere ya. [Image na nri] Dịka James Dillet Freeman si kwuo, onye edemede, onye edemede na onye ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Unity movement, ihe omume a kọwara na Charles Fillmore bụ nwata ihe mberede na-agba agba mgbe ọ dị afọ iri mgbe ọ kwụsịrị ikpere ya. A dịghị emeso mmerụ ahụ ahụ n'ụzọ zuru ezu, ọ weghaara Fillmore afọ abụọ ka ọ gbakee, bụ nke oge ọ hapụrụ ya na ụkwụ nwere nkwonkwo ụkwụ ya na ụkwụ aka ya. Ọ dakwara n'azụ ụlọ akwụkwọ, ọ bụ ezie na ọ laghachiri obere oge mgbe ọ gbakechara, ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ na-adịgide adịgide obere oge ka e mesịrị nyere ya aka. Na 1874, mgbe ọ dị afọ iri na itoolu, Fillmore hapụrụ Minnesota, ọ rụkwara ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Denison, Texas, bụ ebe ọ na-esonyere akwụkwọ edemede na ndị ọkachamara. Ọ bụ n'ìgwè a ka o zutere Myrtle. Charles na Myrtle lụrụ na March 29, 1881 (D'Andrade 1974; Vahle 2008; Freeman 2000: 23-25). Ha mechara biri na Kansas City, Missouri, ebe Charles banyere ụlọ ahịa ụlọ ahịa. Ha nwere ụmụ atọ, Lowell Page (1882-1975), Waldo Rickert (1884-1965), nke a maara dị ka Rick, na John Royal, nke a maara dị ka Royal (1889-1923), ndị atọ n'ime ha na-arụ ọrụ dị mkpa na nduzi na mgbe e mesịrị mmepe nke ịdị n'otu.
Dị ka ọtụtụ mmegharị okpukpe ọhụrụ na nke ọzọ, Unity enweghị oge doro anya. Kama nke ahụ, Fillmores malitere usoro ihe omume nke mechara duga ha ka ha bụrụ ndị isi nke ìgwè ọhụrụ. Nke a bụ akụkọ banyere ịgwọ ọrịa, ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ, na ịzụlite ụdị nke ụka, na-eduga ná mmegharị nke na mmalite narị afọ nke iri abụọ nà mbụ, a maara nke ọma dịka ụdị Protestant America ọzọ.
Mgbe Fillmores malitere usoro ọgwụgwọ nke ga-eduga n'Ịdị n'Otu, site n'aka nke aka ha, ha ebughị n'uche ịhụ òtù okpukpe. Myrtle Fillmore wee nwee mmasị ma jiri usoro ọgwụgwọ agwọ ọrịa ọhụrụ nke New Thought. Charles jiri usoro ọgwụgwọ Myrtle mee ihe, ọ kwenyere na ya enwere ike iwepụ ihe mgbu ya mgbe nile ma mee ka ụkwụ ya kpọnwụrụ na-eto eto ruo ogologo oge. Ahụmahụ ahụ, yana nsogbu siri ike nke Charles na ahịa Kansas City dị egwu, mere ka o chee na ọ bụghị naanị maka ịgwọ ọrịa kamakwa banyere mbipụta. N'April nke 1889, Charles bipụtara mbipụta mbụ nke Echiche nke Oge a, magazin a raara nye na-agbasa echiche ya na Myrtle mụtara ma malite ime (Freeman 2000: 54-55). Nke ahụ bụ nke mbụ nke ọtụtụ oge, yana akwụkwọ nta na akwụkwọ, Ịdị n'otu ga-ebipụta. Ihe ka ukwuu n'ime oge ndị a na-eji eme ihe maka ndị mmadụ, dịka ndị nne na ụmụaka, ma ọ bụ ndị ọchụnta ego, ebe akwụkwọ ndị ahụ na-edekọ akwụkwọ nke mbụ ka edepụtara na ụzọ ọhụrụ ma zubere ka ndị na-ege ntị na ndị ọkà mmụta sayensị bụ Ndị Kraịst ọhụrụ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịghọta ọtụtụ n'ime ọrụ mbụ nke Fillmores dị ka ndị editọ na ndị na-agụkọ echiche na omume dị iche iche nke New Thought ndị na-ekesa na njedebe nke iri na itoolu- na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ na narị afọ America (Freeman 2000: 55). Mgbasa ozi bu ihe etiti etolite na Unity. Ọgagharị ahụ ebipụtala ọtụtụ nsụgharị dị iche iche nke magazin ahụ nke a na-akpọ taa Unity Magazine, yana nke magazin ụmụaka (Anyị Amamihe), magazin maka ndị ọchụnta ego (Onye ọchụnta ego Ndị Kraịst), akwukwo ndu ekpere a na-ewu ewu kwa ubochi (Okwu Ubochi) na akwụkwọ akụkọ maka nzukọ (Ịdị n'Otu Kwa izu), ịkpọ aha naanị akwụkwọ ndị a na-ahụ maka akwụkwọ. Ịdị n'Otu ebipụtawokwa ọtụtụ akwụkwọ na traktị. Ya mere otu akụkụ dị mkpa nke ịdị n'otu Unity sitere na ọrụ nke Fillmores na-edezi ma na-agbanwe echiche na omume nke ụwa dị iche iche nke American New Thought n'oge na -eme ka echiche ndị ahụ dịgasị iche na nke a na-ebipụta.
Ka narị afọ nke iri abụọ gara n'ihu, Unity nọgidere na-eto ma na-eme onwe ya ka ọ bụrụ òtù okpukpe. Òtù ahụ malitere ịpụta "Nkwupụta Okwukwe," mepụtara usoro mmekorita nke mesịrị ghọọ usoro ọzụzụ nke ozi, guzobere otu ụlọ ọrụ ahazi, nke a na-akpọ Nzukọ nke Otu Unite na Churches maka ọtụtụ narị afọ nke iri abụọ, nke nyeere ndị ụka n'otu n'otu akawanyewanye, ma na - eto eto na - agụnye ụka dị iche iche na obodo America ọbụla nakwa ọtụtụ na Europe na Asia. Ogbako ahụ emeekwala weebụsaịtị (Unity website nd) na-agụnye nza nke ngwa ngwa ịnweta ozi gbasara ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme na omume ya na nkwenkwe ya ugbu a.
Ndị Fillmores weere usoro nhazi iji mee ka ozizi ha dịwanye mma site na iji ọrụ mbipụta ha iji kọwaa ma gbasaa ozi ha. Na mgbakwunye na nnukwu ọrụ site n'aka Myrtle na Charles Fillmore, site na mmalite 1890s, Unity amalitelarị na-ebipụta ọrụ nke ndị ọzọ ederede, nke ka nke H. Emilie Cady (1848-1941). Cady bụ dọkịta homeopathic na New York bụ onye mụụrụ Emma Curtis Hopkins, bụ onye ndú New Thought nke mbụ na-arụ ọrụ na Fillmores. Myrtle Fillmore gụrụ akwụkwọ nta nke Cady dere nke bụ "Ịchọta Kraịst n'ime onwe anyị" (Freeman 2000: 75-76). Ọrụ dị mkpirikpi ahụ masịrị ma Fillmores abụọ ka ha rịọrọ Cady ka ha dee usoro maka magazin ha, bụ nke e mepụtara n'oge na-adịghị anya. Nkuzi na Eziokwu, ọrụ Unity na-akpọ akwụkwọ ọgụgụ ya na nke a na-ewere dịka ọrụ dị mkpa maka New Thought (Braden 1963: 244-45; Satter 1993:239).
Nkuzi na Eziokwu haziri n'ime edemede iri na abụọ, nke ọ bụla na-ekwu banyere otu isi maka ịdị n'otu. Dị ka Cady si kwuo, Chineke bụ ebe niile, na-arụ ọrụ dị mma nke bụ ihe ndabere nke ihe niile dị. Ụmụ mmadụ ga-aghọta ike ahụ ma mụta ịrụ ọrụ na ya, ma mgbe ha mere Chineke bụrụ isi iyi maka ihe niile dị mma na ndụ mmadụ. Nkuzi na Eziokwu akọwa kwa ọdịdị mmadụ, ọdịdị nke nsogbu ndị mmadụ na-enwe, na ụzọ isi edozi nsogbu ndị ahụ. Ọ bụ ya bụ isi akwụkwọ mmụta mmụta maka Unity (Cady 1999).
The Fillmores na-eme ihe doro anya taa ihe ọtụtụ mmadụ ga-atụle banyere okpukpe ma ọ bụ nke ime mmụọ. Ha jiri echiche dịgasị iche iche mee ihe na New Thought milieu tinyere ịgagharị nkwenkwe na omume nke okpukpe ndị ọzọ n'oge iri afọ ole na ole gara aga nke ịdị n'otu. Otú ọ dị, otu nzọụkwụ dị mkpa ná mmepe nke Ịdị n'Otu bụ ebumpụta ụwa nke "Nkwupụta Okwukwe." E bipụtara "Nkwupụta Okwukwe" nke mbụ na February 12, 1921, mbipụta nke Ịdị n'Otu Kwa izu. "Nkwupụta nke Okwukwe" weere mgbanwe ụfọdụ n'ime afọ ole na ole mbụ, malite na iri abụọ na asaa isi, wee gaa iri atọ na abụọ isi na mbipụta April 1921 mbipụta nke Ịdị n'Otu magazin, na n'ikpeazụ ịhazi ihe iri atọ na 1939. Ihe odide ahụ agbanweghị agbanwe ruo mgbe 1982 mgbe Unity na-akwụsị ịkwụsị "Nkwupụta nke Okwukwe". Ọ bụ ezie na ederede na igbe dị na nchịkọta na Archive Unity na-ekwu na Charles Fillmore bụ onye edemede nke nsụgharị niile nke "Nkwupụta nke Okwukwe."
"Nkwupụta nke Okwukwe" bụ isi ihe dị mkpa na mmepe Unity dị ka usoro okpukpe. N'ụzọ bụ isi, ọ na-egosi echiche dị n'etiti ọtụtụ ndị Fillmores mụtara na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ ha lere anya dị ka ihe dị mkpa iji tinye dị ka ụkpụrụ bụ isi maka usoro okpukpe ha. Ọ na-egosiputa nhazi nke echiche okpukpe dị ka ihe dị mkpa maka ịdị n'otu, na-egosi isi okwu nke Unity nwere ike bụrụ nke a ga-ahụta dị ka otu òtù okpukpe kwụ ọtọ, kama ije Ọhụụ Ọhụrụ.
Otú ọ dị, Unity ugbu a na-arụ ọrụ n'okpuru nkwupụta ụgha dị iche iche dịka ọ mere n'oge Myrtle na Charles Fillmore. Na mbipụta January 1989 Okwu Ubochi, Connie Fillmore, bụ́ onye isi oche ọhụrụ nke Unity, bipụtara otu isiokwu nke isiokwu ya bụ, "Echiche Onye Oge Ya." N’isiokwu ahụ, Connie Fillmore kọwara “Fivekpụrụ Ise,” nke Unity nke ọ rụrụ ụka na-anọchi anya isi nke njirimara Unity. Isiokwu ahụ bụ isi mbụ nke Connie Fillmore, bipụtara dị ka onye isi oche nke Unity, na n'ime ya ọ natara "Nkwupụta Okwukwe" nke Unity. Tupu e bipụta ya, e nwebeghị “Nkwupụta Okwukwe” kemgbe 1982, mgbe ndị ngagharị ahụ ka na-ebipụta “Nkwupụta Okwukwe” nke 1939. "Fivekpụrụ ise" bụ nkwupụta nke Unity banyere njirimara ya:
Chineke bu isi na onye okike nke ihe nile. Enweghị ike ọzọ na-adịgide adịgide. Chineke dị mma ma na-anọ n'ebe niile.
Anyị bụ mmadụ ime mmụọ, kere n'onyinyo Chineke.
Mm] nke Chineke naebi nime onye] b la; ya mere, mmadu nile di nma.
Anyị na-emepụta ahụmahụ anyị site na ụzọ anyị si eche echiche.
Enwere ikike n'ekpere siri ike, nke anyị kwenyere na-eme ka anyị na Chineke dịkwuo ná mma.
Ịmara banyere ụkpụrụ ime mmụọ ndị a ezughị. Anyị ga-ebi ndụ ha (Banyere Ịdị n'Otu).
Mgbanwe nke Unity bụ isi ihe mere n'oge nke nzukọ ahụ amalitela ịmara nnukwu ụdị dịgasị iche iche na-arụ ọrụ n'ime Unity movement. N'adịghị ka "Nkwupụta Okwukwe" nke gara aga, "Iwu ise" enweghi asụsụ Ndị Kraịst na-akwadoghị ma kwuo na Unity nwere ike ịgbanwegharị aha ya ka ọ bụrụ na ọ na-etinye aka na omenala okpukpe America nke mepere emepe kemgbe 1960s. Ndị isi nke otu na Ụlọ Akwụkwọ Unity nabatara "Iwu Ise" ugbu a, na-ebigharị ya na ọtụtụ akwụkwọ nta Unity na-agụnye na weebụsaịtị Unity School, na ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ nke ọgbakọ ọ bụla.
E guzobere Ụlọ Nzukọ Na-adị n'Otu malitere na June 1891 nke Ịdị n'Otu, nke Fillmores kwadoro ka e guzobere alaka mpaghara nke nzukọ ha malitere ịkpọ Society of Silent Unity. Omume na omume nke Society of Silent Unity jikọrọ ozi na omume ndị ọhụrụ echetara na ụdị Protestant. Nkọwapụta dị na magazin akụkọ a na-edozi otu ihe omume dị iche iche dị na ụfọdụ n'ime ihe ndị dị na ya na ndị a chọtara n'ọtụtụ chọọchị ụka Protestant. E nwere aro maka onye ụkọchukwu na-eduzi ntụgharị uche nke ọma, na-esote egwú na abụ otuto, onye na-elekwasị anya n'echiche ahụ maka ọnwa, mgbe ahụ ịghachiteghachi echiche ahụ, na n'ikpeazụ ịgwọ ọrịa.
Isi ọrụ nke ọrịa na mmerụ ahụ dị na Fillmores 'na-egosipụta n'ụzọ doro anya mmepe nke ememe na omume ndị ọzọ. Myrtle nọgidere na-enwe nsogbu ahụike dịgasị iche iche na ndụ ya. The Fillmores nwara ọtụtụ ụdị usoro ọgwụgwọ ma gaa ọtụtụ okwu okwu banyere ọgwụgwọ na mgbalị iji nyere Myrtle aka ịgbake. N'ikpeazụ, na aro nke otu enyi, ha na-aga na nkwurịta okwu site na Eugene B. Izu nke College Metaphysical Illinois. Na nkuzi ahụ, Myrtle mụtara usoro ekpere nke a maara na New Thought circles dika nkwenye. Nkwenye bụ nkwupụta banyere eziokwu na, mgbe e mere ugboro ugboro, weta ọnọdụ nke eziokwu ahụ. N'okwu a, "Abụ m nwa Chineke, ya mere anaghị m eketa ọrịa," ka Myrtle Fillmore na-eji agwọ onwe ya.
Fillmores malitere usoro ọgwụgwọ ọgwụ na mmiri nke 1889. Ha anatala asambodo dịka ndị na-eme nke Christian Science na July 1887 (Vahle 2008: 207-80). "Ngwọta mpaghara," dị ka Myrtle na Charles zoro aka na omume ha nke ịhụ ndị ahịa nọ n'ọfịs maka nzube nke ịgwọ ọrịa, bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ Fillmores. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe ndekọ nke ọgwụgwọ Myrtle na-adịgide ndụ, Charles kwuru na ọ hụwo na ọ dịkarịa iri abụọ ikpe n'ụbọchị ọ bụla maka afọ iri abụọ. Ịgwọ ọrịa malitekwara ịrụ ọrụ dị ukwuu n'ime akwụkwọ ndị dị na Unity, na mkparịta ụka banyere usoro ọgwụgwọ dị iche iche yana akụkọ banyere ọgwụgwọ na-apụtakarị na mbido Unity. Otú ọ dị, usoro ọgwụgwọ nke ndị Fillmores adịghị egosipụta na-apụta ìhè na Unity publications (Vahle 2002: 208). Ọtụtụ ihe dị oké egwu maka ememe ememe Unity bụ Fillmores 'na-ewere na ọgwụgwọ ọhụụ ọzọ a na-akpọ ndị na-adịghị anọ ma ọ bụ ọgwụgwọ na-adịghị na ya, omume nke ikpe ekpere maka ọgwụgwọ maka onye ọ bụla, site n'ebe ọ bụla, rịọrọ ekpere ngwọta.
Dabere na omume ndị a nke na-agwọ ọrịa dịpụrụ adịpụ, na 1890 Fillmores tọrọ ntọala "Enyemaka Silent," a na-arịọ arịrịọ ekpere dị ugbu a dị ka Silent Unity, bụ nke na-anọchite anya Unity ka ọtụtụ nde ndị na-ekpe ekpere kwa afọ site n'aka otu. Akwụkwọ ọkwa maka Society pụtara na mbipụta April 1890 Chee echiche. Edere site na Myrtle Fillmore, mkpirikpi ahụ kọwara atụmatụ iji gwa ndị mmadụ ka ha na-ekpe ekpere n'otu oge kwa ụbọchị, nakwa ịkọwa àgwà Chineke na mmekọrịta mmadụ na Chineke.
Onye ọ bụla nke ga-esonyere ọha mmadụ, naanị ihe a chọrọ bụ na ndị otu ga-anọdụ ala n'oche, ezumike nká, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na elekere 10 n'ehihie ọ bụla, ma jigide nkata dị jụụ, n'ihi na ọ bụghị ihe na-erughị iri ise na ise, okwu ndị a ga-enye kwa ọnwa site nchịkọta akụkọ nke ngalaba a ... ... Chineke bụ ịdị mma niile na ebe niile. Ọ bụ Nna na-ahụ n'anya, na abụ m nwa Ya, nweekwa àgwà niile nke ndụ, ịhụnanya, eziokwu, na ọgụgụ isi. N'ime Ya ka ahuike, ike, amamihe, na nkwekorita nile di n'ime ya, dika nwa Ya, ihe ndi a nile bu nke m site na imata eziokwu nke Chineke bụ niile (Freeman 2000: 81-82).
Myrtle Fillmore ghọtara n'ụzọ doro anya ọrụ nke ịgwọ ọrịa na-adịghị na mbụ na New Thought, na-ekweta na omume ahụ laghachiri ma ọ dịkarịa ala na ọsụ ụzọ Plinas Quimby bụ New Thought. Ma, Fillmore kwukwara na omume a bụ omenala nke ụwa ndị Kraịst na-agwọ ọrịa, ọ zoro aka na Matiu 18: 19, "N'ezie ana m agwa gị na ọ bụrụ na mmadụ abụọ n'ime ụwa kwenyere n'ihe ọ bụla ha rịọrọ, a ga-eme ha Nna m nke bi n'eluigwe, "dị ka akụkụ nke ezi omume ya maka omume ahụ. Ọzọkwa, ihe ndị a mbụ na omume ndị ga-abụ ihe ndabere maka Silent Unity na-egosi na Myrtle Fillmore amalitela ijikọta ụdị ọgwụgwọ ọ bụla a na-eme n'Ọdịiche na ọrụ nzọpụta. O dere na Society bụ "imeghe ụzọ maka ndị na-achọ ka ha merie mmehie, nsogbu, na nsogbu" (Freeman 2000: 81). Myrtle Fillmore na-ekwu na omume nke ndị nkụzi Unity nwere ike, na mgbakwunye na ịgwọ ọrịa anụ ahụ, nwere mmetụta dị mma na ọnọdụ nke onye ọrụ ahụ na Chineke. Unity Unitynt na-egosi otú Fillmores si mepụta ụzọ maka ịzụta mmekọrịta salvific na Chineke site na iji ọgwụgwọ eme ihe site na nkwenye na ekpere.
Dị ka Neal Vahle si kwuo, onye nchọpụta na onye mbụ Unity Magazine nchịkọta akụkọ nke bipụtara ọtụtụ akwụkwọ na Unity, nzube nke Silent Unity bụ iji kwalite mmepe ọrụ Fillmore karịrị Kansas City. N'ụzọ doro anya, Silent Unity bụ, ma na-anọgide, akụkụ dị mkpa nke ọrụ mgbasa ozi na ọrụ mgbasa ozi. Dịka akụkụ nke ọrụ Society, nke aha ya bụ Society of Silent Unity na June 1891, Unity bipụtara na Ịdị n'Otu egosi na a ga-emeghachi ya ugboro ugboro n'ụbọchị. Na-egosi n'okpuru isiokwu bụ "A Daily Word," nkwupụta ndị a bụ nkọwa nke ụkpụrụ ọhụrụ na echiche ndị Fillmores kụziri ga-enyere onye ahụ aka ijikọta na "Mmụọ nke Chineke n'ime" (Vahle 2002: 212-13). Nkebi akwukwo a bu ihe omuma Okwu Ubochi, Akwụkwọ a kacha ewu ewu na Unity taa. Vahle kwukwara na Society of Silent Unity bụ ebe ebe mmegharị ahụ si malite. Ndị Fillmores hụrụ ntụgharị uche nke ọma maka minit iri na ise kwa ụbọchị, omume ha na-akwalite dịka akụkụ nke Society of Silent Unity, dị ka ihe nkwado maka iji nkwenye eme ihe n'ịgwa Chineke n'ime (Vahle 2002: 213-14). Taa, ndị otu a na-ezo aka na omume ahụ dịka "ịbanye n'ime ịgbachi nkịtị" ma ọ bụ "abanye na ịgbachi nkịtị," ọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke omume ekpere Unity.
N'ime oge mmepe ya, Unity kwadoro ọtụtụ omume ndị ọzọ, ihe kachasị mma na nri anaghị eri anụ, dịka ihe enyemaka maka ịmecha ma gwọọ ahụ na ime onwe ya na mmekọrịta dị mma na Chineke. Onye na-eri anụ na-emekarị ka ọ bụrụ isi nke mmalite nke Unity, na akwụkwọ ndị a na-ebipụta akwụkwọ nri na ebe obibi akwụkwọ ma na-arụ ọrụ ụlọ oriri na-eri anụ na obodo Kansas City na mmalite narị afọ nke iri abụọ. Omume dị otú ahụ na-egosi ụfọdụ ụzọ dị iche iche Unity si dị iche na Science Ndị Kraịst, òtù nke mere ka Fillmores na Unity na-emetụta n'ụzọ doro anya na nke Ịdị n'Otu na-enwe mmetụta siri ike na ọtụtụ akụkụ nke nkuzi na omume ya. N'adịghị ka Ndị Kraịst Sayensị, ndị na-arụ ọrụ na ndị mbụ na-arụ ọrụ n'otu n'otu nabatara ihe dị adị nke ahụ ma nabatara na-eme ụdị omume ndị Unity kwadoro n'oge akụkọ ntolite ya.
Ọ bụ ezie na ebe Mystle Fillmore nwụrụ na-amalite ime njem, mgbe òtù Myrtle Fillmore nwụsịrị, òtù ahụ malitere ịmalite ịkwado omume anụ ahụ dị ka nri anaghị eri anụ na-elekwasị anya n'ekpere, mgbasa ozi, na nkwenye dị ka okwu bụ isi nke Unity's ụkpụrụ. Enweghị nkwenye ma ọ bụ anaghị eri anụ bụ akụkụ nke ozizi Unity.
Maka ọtụtụ n'ime akụkọ ihe mere eme ya, Unity bụ ọrụ ezinụlọ. Mgbe Myrtle na Charles Fillmore agafeela, ụmụ ha, ụmụ ụmụ ha na-esochi ya, na-edu ndú nke òtù ahụ. Ndị Fillmores nwekwara ụdị ndị Protestant na-ekwupụta n'ụzọ doro anya ka òtù ahụ toro ma mepụta. N'ime mmalite nke Unity Unity, otu Unity Churches nke mbụ na-abụghị nke Kansas City malitere. N'otu oge ahụ, ọrụ Unity na-ebipụta na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịgbasa ozi nke Unity dị n'otu na-eto eto.
Ọganihu nke Unity movement malitere na ngwụsị nke iri na itoolu na mmalite nke iri abụọ na narị afọ gụnyere mmemme nke nzukọ na-akpali site Fillmores nke mejupụtara ìgwè ahụ ma nye ebe ụfọdụ maka ọrụ ha. Neal Vahle bụ eziokwu mgbe ọ na-arụrịta ụka na ọganihu nke Unity na ogologo ndụ ya, karịsịa ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na-eme n'oge ahụ, ga-ekwu na ikike nke nzukọ Charles Fillmore (Vahle 2002: 145). Ahụmahụ Charles dị na azụmahịa na-arụ ọrụ dị mkpa n'ụzọ dị mkpa n'otú o si tụlee ime nzukọ na iduga òtù okpukpe. Dịka ọmụmaatụ, Fillmores gbazitere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abawanye ibu na azụmahịa ndị a na-ahụkarị-n'ógbè ndị dị elu na Kansas City iji nye ohere maka ọrụ obibi akwụkwọ na ọrụ ịgwọ ọrịa. A na-enye ndị mmadụ akwụkwọ ozi okpukpe site na ụlọ ọrụ mbipụta, ụlọ ọrụ Tholy Publishing Company, ụlọ ọrụ Unity Book, na Unity Tract Society. Charles guzobere ndị a ma na-agba ha ọsọ ọsọ dịka ụlọ ọrụ ndị mmadụ na-enweghị ụlọ ọrụ, na-enye ya ohere ibipụta ihe site na ebe ọ bụla ọ hụrụ na ọ dị mma ma na-enyere ndị ọrụ ego aka. Charles na-ahazi ọgbakọ mbụ nke Unity, Kansas City Society of Practical Christianity, dị ka nke na-enweghị ọrụ nzukọ chọọchị na 1903 (Vahle 2002: 145-206). Charles nyere aka n'ịzụlite mmemme akwụkwọ ozi, nke mbụ malitere na 1909, bụ nke nyeere aka gbasaa ozi Unity na United States ma bụrụ ndị bu ụzọ gaa Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Nkụzi Okpukpe, nzukọ nke na-azụ ndị nkụzi na ndị ụkọchukwu. Charles guzobere ma tinye ya na April 14, 1914, nke "Unity School of Christianity" (Vahle 2002: 147). [Image na nri]
Mkpebi ahụ, o doro anya na ọ dabeere na nkwenkwe na iji rụọ akwụkwọ obibi Ụlọ Akwụkwọ ga-ahazi n'usoro iwu azụmahịa dị ka ụlọ ọrụ azụmahịa, nwere mmetụta miri emi maka nduzi na nzukọ nke ịdị n'otu. N'okpuru nsụgharị mbụ ahụ, e nyere agbụrụ Fillmore ezinụlọ iri ise na ngwaahịa, bụ nke nọgidere na-ejide Ụlọ Akwụkwọ na-eji ngwaahịa a ruo 2001, mgbe Connie Fillmore Bazzy, nwa nwa nne nke Myrtle na Charles, haziri Ụlọ Akwụkwọ ahụ n'okpuru ọrụ nchịkwa na Nhazi ụlọ (Vahle 2002: 147-52). Otutu ihe omuma di iche iche nke jikotara mmekorita nke Unity bu ihe puru ighota dika ihe ngosi nke obere onu ahia.
Otu n'ime ihe atụ kachasị mkpa nke obere azụmahịa nke ọrụ bụ Bank Prosperity. Ịdị n'otu dịla anya gosipụtara na ọrụ niile ya dị maka "onyinye nnwere onwe n'efu" naanị. Otú ọ dị, Ịdị n'Otu enwebeghịkwa ihe ịga nke ọma n'ihi uru ọ bara iji nweta ego. Otu n'ime ihe ndị kasị mkpa maka ego maka njem ahụ dabeere na ngwakọta nke ụkpụrụ New Thought na ụdị azụmahịa maka ndebanye aha magazin. Bank Unspotityity Unity bụ ụzọ nke akwụ ụgwọ maka ndebanye aha Ịdị n'Otu magazine. Bank Prosperity bụ igbe kaadiboodu na nkwenye maka ọganiihu e bipụtara n'otu akụkụ yana oghere maka ịtinye dimes. Onye ọrụ nke Prosperity Bank tinyere ego n'otu izu kwa iji kwụọ ụgwọ ndebanye dollar otu. Ndebanye aha malitere mgbe Bank rịọrọ. Onye ọ bụla natara ọrụ ekpere Silent Unity dịka akụkụ nke arịrịọ maka Bank. Mgbe a zọpụtara nnukwu ego nke otu dollar, e zigara ego ahụ na Unity. Vahle na-akọwa mmemme akụ akụ na oke nkọwa ma na-arụ ụka, n'ụzọ ziri ezi, nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na uto nke ịdị n'otu n'oge mmalite na narị afọ nke iri abụọ (Vahle 2002: 153-76).
Uzo ozo di n'ime iri afo nke iri abuo bu inweta nke Unity Farm, nke a maara taa dika Unity Village. Fillmores zụtara ala n'ebe ndịda Kansas City, nso nso Summit, na 1920 iji wuo ụlọ akwụkwọ maka Ịdị n'Otu ma gbasaa oghere maka òtù okpukpe ha. Myrtle na Charles nyere ọrụ maka ịzụlite Unity Village na nwa ha nke abụọ, Rick. Ala, n'ikpeazụ aguputa 1,400 acres na ụlọ isi ụlọ ọrụ nke Unity School of Christianity, Silent Unity, Unity Archives na Library, yana inye ụlọ nkwari akụ na ebe ohere maka Unity azụ, na ụlọ maka ụfọdụ isi Unity na Fillmore ezinyere ezinụlọ, ghọrọ ebe ebumnobi maka otu Unity movement. Obodo Unity bụ isi ụlọ ọrụ nke Unity na obi obi ya. Ụlọ ndị dị na mgbakwasị, dịka Ụlọ Elu Silent Unity na oghere nke ogige dị n'etiti, bụ akara nke Unity. Obodo nta a, nke a na-ede na 1953, na-enye ebe obibi maka ọrụ na ihe ndekọ. Dị ka Vatican dị na Rom ma ọ bụ Mormon Square na Salt Lake City, Unity Village bụ ebe etiti ụwa nke Unity ụwa. [Image na nri] Ala, ụlọ, na ihe ndị dị na Unity Village, na mgbakwunye na ịnye ebe a na-ahụ maka ihe ndekọ ụlọ ma na-eje ozi na-akwado, na-anọchite anya Unity. Foto ndị dị na ụlọ akwụkwọ na na saịtị weebụ na-akwado echiche ahụ bụ na Unity nwere ebe obibi ala ma ọ bụ karịa ozizi, nkwenkwe, na omume.
Nhazi nkuzi nke mbu na nhazi usoro maka inye ndi nkuzi na ndi ozi ndi otu aka bu n'uche na mgbe Myrtle Fillmore nwuru na 1931 na Charles Fillmore nwụrụ na 1948, nzukọ ahụ enweghi nsogbu ndu. Ndi otu ndi isi ochichi di iche iche abiala n'usoro ihe eji eme ka ha na-aru oru nke Ubuala mgbe ndi mmadu ndi n'eme ka ha gaa. Onye isi nke ụlọ ahịa, na nke a, Lowell Fillmore, Charles na Myrtle, bụ ọkpara nke Myrtle, ghọrọ onye ndú nke nzukọ ahụ site n'ịchịkwa ihe ka ọtụtụ n'ime Unity. Usoro nhazi ebe iji mee ka arụ ọrụ dị iche iche nke ịdị n'otu nọgidere na-arụ ọrụ dị ka e zubere mgbe Fillmores gafeworo, si otú a gbochie esemokwu na nsogbu ndị nwere ike ịpụta ma Fillmores bụ ndị ndú ndị na-adọrọ adọrọ nke New Religious Movement.
Ndị Fillmores kụziri n'ógbè ha na Kansas City site na mmalite narị afọ nke iri abụọ ruo mgbe ha nwụrụ. Charles chepụtara ihe mmụta iri na abụọ ọ na-akụzi n'oge nile na 1897, ha amalitewokwa inye akwụkwọ nhazi na mbido 1909. Usoro a nyeere Unity aka ịnọgide na-ejigide ngwongwo nke ndị a zụrụ azụ n'otu ụzọ ahụ n'otu echiche. Usoro mmekorita nke akwukwo ndi mmadu bu ndi a ma ama, idebanye aha, site na Unity's accounts, 2,000 ndi mmadu n'ime afo abuo mbu. Usoro mmekorita bụ ihe mbụ a chọrọ ka a họpụta ya dị ka onyeọrụ na-adịghị n'otu (Braden 1963: 252). Akwukwo mmekorita a meputara n'ime akwukwo ihe omumu nke a na-akuzi na Unity Village, nke meputara n'ime Unity Institute for Continuing Education. Nke a ghọrọ Ụlọ Akwụkwọ Unity for Religious Studies (USRS) na n'ikpeazụ a na-emezigharị ma kpọọ aha Unity Worldwide Spiritual Institute (UWSI).
Ndi otu a na-acho akwukwo nkuzi abuo maka ndi nkuzi na ndi ozi. Nke mbụ bụ Mmemme Mmụta Na-aga n'ihu (CEP) maka ndị nkuzi Unity. Usoro ihe omume a chọrọ klas na Akwụkwọ Nsọ, Metaphysical, na ekpere ọmụmụ na nka, klaasị na akụkọ Unity na New Thought, na ọtụtụ klas nhọrọ n'ụlọ akwụkwọ (Unity School 2001: 7-27). Akụkụ nke abụọ nke usoro agụmakwụkwọ bụ Mmemme Ọzụzụ Ndị Ozi. N'ebe a, ndị mmeri ga-ebu ụzọ gụchaa ọzụzụ CEP wee malite usoro ọmụmụ ihe afọ abụọ ọzọ nke gụnyere klaasị, usoro ọmụmụ, ule na ajụjụ ọnụ na-ejedebe na ikikere na nhazi site n'aka Board of Trustees of the Association of Unity Churches (Unity School 2002) ). Ọzụzụ ahụ mepụtara "Ndị Unity" iji gbasaa ozi ma jupụta ọnọdụ dị na chọọchị dị iche iche, si otú a na-ekwenye na njirimara na-agbanwe agbanwe maka mmegharị ahụ.
Otu mmepe nwere njikọ chiri anya bụ nhazi Ụlọ Nzukọ nke Unity Churches (AUC), nke a maara taa dịka Unites Worldwide Churches (UWC). Mmalite nke AUC bụ nzukọ nzukọ ezumike nke afọ nke ndị ozi na-adịghị n'otu na Kansas City. AUC malitere na 1925 dịka Òtù Na-ahụ Maka Ịdị n'Otu. Dika ndi ozi ndi otu ndi na-ekwuputa ihe ndi ndi ozi choro, dika nke ime mmuo, astrology, na numerology, ebe a na-akuzi ha na nzuko ndi otu, ha kpebiri ime ka otu ndi otu ndi otu ndi otu ozi ghara idi. Ndị otu ahụ nọ na-arụsi ọrụ ike ruo afọ iri abụọ tupu ha amalite ịkpọ "Unity Ministers Association" [sic] (Freeman 2000: 186). Ka nzukọ ahụ mepụtara, ọ nwere ọtụtụ aha na ọtụtụ mgbanwe na mmekọrịta ya na Ụlọ Akwụkwọ Unity. Otú ọ dị, Taa, UWC nwere ibu ọrụ abụọ n'ime ụwa Unity: ọ na-arụ ọrụ dịka nzukọ nkwado maka ọgbakọ Unity n'otu n'otu, ọ bụkwa ahụ nke na-ahụ maka ikikere na ịtọ ndị ụkọchukwu Unity.
Nkwado na mmepe ahụ na-ewe ọtụtụ ụzọ dị mkpa, dị ka ndụmọdụ gbasara ụtụ isi, aro maka ịkwalite ụka, nkuzi nke metụtara ọrụ ụka, ọrụ ndị ntorobịa na ntinye ego, yana ngwaahịa ndị na-ere ahịa dị ka ire ere, ndị na-agba tebụl, akwụkwọ nta, kaadị pew, na pensụl ndị edobere. ya na ozi Unity (Freeman 2000: 186). Ndị otu AUC haziri ndị ministri na ngalaba anọ n'ozuzu ha: Mmụba Ministri (ọhụrụ ma ọ bụ revitalizing ministri); Otu ọmụmụ ihe (obere otu na-ezukọ n'ụlọ ndị otu ma ọ bụ ụlọ obodo, oge izu); Ndị ọzọ ndị ọzọ (ndị ministri a bụkarị ndị na-ekwu okwu, ụlọ ọrụ, ndụmọdụ ma ọ bụ ndị na-ede ederede.) ”Dabere na nha ha, ebumnuche ha na ọkwa ọzụzụ nke ndị mmadụ na-eduzi ozi nke ọ bụla. Atumatu na omume dika ndia putara na AUC nyere ndi otu Unity ogo nke homogeneity n’etiti ndi ụka di iche-iche.
Usoro ihe omumu nke Unity, nhazi usoro, na usoro ulo oru ndi mmadu meputara nke oma gosiputara uzo ozo nke ndi mmadu kwadoro. Kama ịdabere na ọdịdị nke ndị ndu sitere n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ na usoro onye nkuzi-eso ụzọ maka nnyefe nke ndu, Unitydị n'Otu, na ndị mmadụ metụtara ya, mepụtara ma mejuputa usoro agụmakwụkwọ na-abụghị onye iji zụọ ma nye ndị isi ikike. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, Unity mepụtara usoro ụlọ akwụkwọ nke chi na ụlọ ọrụ ụka dị ka ụlọ ọrụ ndị ahụ na-azụ ọtụtụ ndị isi Protestant ma na-enyekwa ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị maka ọrụ nke ụka ndị ahụ.
Otu n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị nke ịdị n'otu, ma ọ dịkarịa ala ka ọ na-ezo aka na ụwa nke okpukpe ọhụrụ, bụ na ọ bụ n'efu ka ọ bụ n'efu na akụkọ ntolite ya. O doro anya na òtù ahụ dị n'okpuru nkatọ ziri ezi nke nkatọ site n'aka Ndị Kraịst na-achọghị ncheta, bụ ndị ọtụtụ n'ime ha na-achọta ozizi Unity banyere ọdịdị nke Chineke na Jizọs dị ka nsogbu. Otú ọ dị, ọga ahụ adịghị ahụ ụdị profaịlụ dị elu, nkatọ ọha na eze na mkparị nke na ọbụna òtù dịka Christian Science, nke Unity na-agbaso ike yiri ya, enwetala. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ịma aka Ịdị n'otu na-eche ihu na ị na-arụ ọrụ nnukwu ụlọ akwụkwọ na nke ụka na-ejikọta ọnụ na obere ego dị na obere okpukpe. Ihe ndị a na-ekwu ma ihe dị mkpa banyere ịdị n'otu na ihe ndị mere ọtụtụ ndị ọkà mmụta banyere okpukpe ọhụrụ na United States anaghị eleghara anya. Ịdị n'otu na-egosiputa otú otu mmegharị na ozizi ndị na-ekwekọghị ekwekọ, nke Ndị Kraịst nwere ike isi zere esemokwu na ọdịbendị gbara ya gburugburu site n'ide onwe ha dị ka a ga-asị na ha bụ ndị isi Protestant. Site n'inwe ụdị na omenala okpukpe, Unity enwere ike ịme ihe ndị ọzọ na-enweghị adọta esemokwu na esemokwu.
Dika odi otua, ihe ndi otu a na-achota ufodu ihe omuma okwu siri ike na okwu ndi ozo banyere omumu nke okpukpe ohuru. Ruo n'ókè nke ndị ọkà mmụta kwenyere n'ihe ndị bụ isi nke kọwaa okpukpe ọhụrụ, esemokwu na okpukpe ndị gbara ya gburugburu na ọdịbendị omenala bụ ihe bụ isi e ji mara ọtụtụ ndị ọkà mmụta ọhụrụ ga-ekweta na okpukpe ọhụrụ nwere. Ịdị n'otu, nke na-ejikọta nkà mmụta okpukpe na-enweghị nkwekọrịta ma nwee akụkọ ihe omume nke omume ndị ọzọ, ma ọ dịghị akụkọ ihe mere eme nke esemokwu dị elu na ọdịbendị gbara ya gburugburu, nsogbu ndị nkwekọrịta. The Fillmores mere ihe dị iche, ma ọ bụghị otú ahụ dị iche na ha kpaliri ire nke ndị agbata obi ha. Ọ bụ n'ihi ihe ndị ahụ a ga-aghọta Unity dịka onye Protestant America ọzọ, kama ịbụ òtù okpukpe ọhụrụ.
Image #1: Foto nke Myrtle Fillmore.
Image #2: Foto nke Charles Fillmore.
Image #3: Foto nke Unity School of Christianity.
Image #4: Foto nke Unity Village.
Association nke Unity Churches website. n "ngalaba nke ederede" http://www.unity.org/directoryfinder.html na 29 June 2007.
Braden, Charles. 1963. Mmụọ na nnupụisi. Dallas: Southern Methodist University Press.
Cady, H. Emilie.  1999. Nkuzi na Eziokwu. Unity Village, MO: Unity Books.
D'Andrade, Hugh. 1974. Charles Fillmore: Herald nke New Age. New York: Ndị mbipụta Harper & Row.
James Dillet, Freeman. 2000. Akụkọ nke ịdị n'otu, Nke nke anọ. Unity Village, MO: Unity Books.
Juda, J. Stillson. 1962. Mkpụrụ obi na nnupụisi: History and Philosophy of Metaphysical Movements in America. Philadelphia: Westminster Press.
Quimby, Phineas P. 1921. Ihe odide ndị na-agba ume, nke HW Dresser deziri. New York: Ylọ ọrụ Thomas Y. Crowell.
Akuko, Jeremy. 2010. "Ịdị n'otu: Ịme Ihe Okpukpe America." Ph.D. Dissertation, Mahadum Indiana.
Satter, Beryl. 1999. Mkpụrụ Obi Ọ Bụla. Berkeley na Los Angeles: Mahadum California Press.
Ụlọ Unity maka ọmụmụ ihe okpukpe. n "usoro ihe omumu, 2001 Catalog,"
Ụlọ Unity maka ọmụmụ ihe okpukpe. "Mmemme Ọzụzụ Ndị Ozi, 2002 Catalog."
Unity website. nweta nnweta site na www.unity.org na 29 November 2017.
Unity website. na "Banyere Ịdị n'Otu." Nabatara na http://www.unityonline.org/aboutunity/whoWeAre/faq.html#teachings, nweta 18 February 2008.
Onwuchekwa. 2008. Njem Ime Mmụọ nke Charles Fillmore: Ịchọpụta Ike n'ime. West Conshoshocken, PA: Templeton Foundation Press.
Neal Vahle. 2002. Movementdị n'Otu: Nwepụta ya na Ozizi Ime Mmụọ. Philadelphia & London: Templeton Foundation Pịa.
Vahle, Neal. 1996. Onye na-enwu ọkụ na-enye ìhè: Ụzọ ndụ nke Myrtle Fillmore. Mmiri Ndagwurugwu, CA: Open View Press.
Witherspoon, Thomas E. 1977. Myrtle Fillmore: Nne nke ịdị n'otu. Obodo Unity, MO: Akwụkwọ Unity.
Albanese, Catherine L. 2007. Republic nke Uche na Mmụọ: Akụkọ Omenala nke Okpukpe Metaphysical America. New Haven & London: Mahadum Yale University.
Gaither, James. 1999. Charles Essillmore Dị Mkpa: Akwụkwọ E Dere n'Akwụkwọ nke Missouri Mystic. Unity Village, MO: Unity Books.
Haller, John S., Jr. 2012. Akụkọ nke Echiche Ọhụrụ: Site na Mmetụta Mkpụrụ Obi na Echiche Ezi uche na Oziọma Ọganihu. West Chester, PA: Swedenborg Foundation Press.
Schmidt, Leigh Eric. 2005. Mkpụrụ Obi Na-adịghị Ike: Makingme Ime Mmụọ Ime Mmụọ nke America site na Emerson ruo Oprah. San Francisco: Harper Collins.